मधेस आन्दोलनको प्रथम सहिद महतोकै जन्म स्थल नवराजपुरमा डा राउतले बलिदानी दिवस मनाउने | News Madhesh
लहान, ५ माघ।मधेस आन्दोलनका पहिलो शहिद रमेश महतोको बलिदानी दिवस डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सिरहाको नवराजपुरमा मनाउने भएको छ । नवराजपुर गाउँमा शहिद महतो परिवारको घर पर्छ ।
२०६३ माघ ५ गते आजकै दिन लहानमा मधेस आन्दोलनका क्रममा महतो शहिद भएका थिए । आन्दोलनकारीले तत्कालिन माओवादीको गाडी रोकेपछि चलाएको गोली लागेर महतोको मृत्यू भएको थियो । त्यसपछि मधेसभर आगो झै आन्दोलन फैलिएको थियो ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. राउत लहानस्थित शहिद महतोको शालिकमा माल्र्यापण गर्ने र त्यसपछि भगवानपुर गाउँपालिका र सखुवानारकट्टी गाउपालिकामा पार्टी कार्यलय उदघाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसपछि नवराजपुर वडा नम्बर ४ सोनवर्षा पुगेर बलिदानी सभा गर्ने जनमत पार्टीका प्रशिक्षक संजय यादवले जानकारी दिए ।